TribeTokes CBD ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - shopgiejo.com
မင်္ဂလာပါ 2017 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော အမျိုးသမီးများ တည်ထောင်ထားသော CBD ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်သည် သန့်ရှင်းသော vaping အတွက် ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဟု ယူဆပါသည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း TribeTokes သည် သန့်ရှင်းသော၊ ဘေးကင်းပြီး သန့်စင်သော CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်များနှင့် CBD gummies တို့ဖြင့် ၎င်း၏အစုစုကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
အဖွဲ့သည် ကျွန်ုပ်အား စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ထုတ်ကုန်များစွာကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပို့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်း၊ ပို့ဆောင်မှုနှင့် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုရေးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာ သင်မျှော်လင့်ထားရမည့်အရာကို သိနိုင်ရန် ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။
TribeTokes ကို Degelis Tufts Pilla မှ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Degelis သည် သူမ၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို မထိခိုက်စေသော သန့်ရှင်းသော CBD vapes များထုတ်လုပ်ရန် စတင်စဉ်းစားလာခဲ့သည်။ သူမသည် လယ်သမားများ၊ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များ၊ ထုတ်ယူသူများနှင့် လက်တွဲပြီး သဘာဝအတိုင်း သီးသန့် vape oil formula ကို ဖန်တီးသည်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုကင်းစင်သော vape ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင် ထင်ရှားသောဆိုင်ခွဲများတွင် TribeTokes အပါအဝင် 2019 ခုနှစ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်သည် ထင်ရှားလာပါသည်။
အခွင့်အလမ်းအတိုင်း Degelis သည် Kymberly “KymB” Byrnes နှင့် လမ်းဖြတ်ကူးခဲ့သည်။ CBD ဝါသနာအိုးများ၏ တင်းကျပ်သော အသိုက်အဝန်းတစ်ခုအတွက် မျိုးနွယ်စုတစ်ခု ဖန်တီးလိုကြောင်း သူတို့ လျင်မြန်စွာ သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ မကြာမီတွင်၊ Tribebeauty အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု CBD လိုင်းကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ လမ်းညွှန်မူမှာ "မင်းရဲ့မိခင် သို့မဟုတ် ညီမကို မပေးမယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို ဘယ်တော့မှ မရောင်းပါနှင့်" TribeTokes သည် ယခုအခါတွင် ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည့် စျေးကွက်တွင် အနည်းငယ်သောထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
TribeTokes သည် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော လျှော်ပင်များမှ CBD ကို ထုတ်ယူပြီး US လိုင်စင်ရ အော်ဂဲနစ်လယ်ယာမြေများရှိ ဘေးကင်းရေးစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ရောင်စဉ်အပြည့် CBD ပေါင်းခံများနှင့် သဘာဝ terpenes ကို နဂိုအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် CO2 ထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တည်ငြိမ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးမပြုကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးသည်။ အမှန်မှာ၊ TribeTokes ထုတ်ကုန်များသည် GMOs၊ အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ကင်းစင်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို အလုံးစုံကောင်းမွန်သောစိတ်ဖြင့် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်မှာ TribeTokes ထုတ်ကုန်များကို ဘေးကင်းမှုနှင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသေချာစေရန် ပြင်ပကုမ္ပဏီဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပြန်အမ်းငွေ မူဝါဒများ
ကုမ္ပဏီသည် $100 အထက်ဝယ်ယူမှုများအတွက် အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ၎င်းတွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒလည်း ရှိသည်။ တံဆိပ်ခတ်ထားသော ထုတ်ကုန်များကို ပြန်ပေးနိုင်ပြီး ပြန်အမ်းငွေ အပြည့်ရနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီဘက်မှ အမှားအယွင်းရှိပါက ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများကို ပြန်အမ်းပေးပါသည်။ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန်၊ သင်သည် ဖောက်သည်အကူအညီကို ဆက်သွယ်သင့်သည်။
TribeTokes တွင် လျှော့စျေးများနှင့် လျှော့စျေးများအတွက် သုတေသနပြုသောအခါ၊ ရွေးချယ်ထားသော ထုတ်ကုန်များကို လျှော့စျေးချထားကြောင်း သတိပြုမိပါသည်။ လက်ရှိရောင်းချနေသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်ချက်ချင်းသတိပြုနိုင်ပြီး သင်မည်မျှ ချွေတာမည်ကို သိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အားလပ်ရက် လျှော့စျေးများကို သတိထားကြည့်ပါ။ ကုမ္ပဏီသည် ခရစ္စမတ်နှင့် ချစ်သူများနေ့များတွင် ရောင်းချပေးလေ့ရှိသည်။
ထို့ထက်မက၊ ကျွန်ုပ်တို့ အနည်းငယ် ဆွေးနွေးမည့် ထုတ်ကုန် နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သင် ချွေတာနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်စာရင်းတွင် ပါဝင်ရန်အတွက် 15% ဆိုဒ်အနှံ့ ရိုးရှင်းစွာ ပေးဆောင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အနာဂတ်တွင် လျှော့စျေးများ၊ ပါတီဖိတ်ကြားမှုများ ရယူခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်း သင်ဆက်လက်သိရှိနေပါမည်။ CBD သတင်း.
vape ကိုဗဟိုပြုအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်စတင်ခဲ့ရာသည် ပြီးပြည့်စုံသော CBD ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်၊ သင်သည် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သွားဖုံးများအပါအဝင် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အောက်တွင်၊ ထုတ်ကုန်အချို့နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေပါ။
TribeTokes တစ်ခါသုံး Vape Pen
သွားရင်းလာရင်းအသုံးပြုရန် ပြီးပြည့်စုံသော၊ TribeTokes မှ တစ်ခါသုံး ဘောပင် ကျွန်တော်စမ်းဖူးသမျှ vape pen သုံးရတာ အလွယ်ဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို ဗူးအပြင်ဘက်တွင် ယူလိုက်သည်နှင့် အသုံးပြုရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရန် မလိုအပ်ပါ — ၎င်းကို ရှူသွင်းခြင်းဖြင့် အသက်ဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်ကြိုတင်အားသွင်းခြင်းပါရှိသည်။
ယခု၊ ဘောပင်သည် မယုံနိုင်လောက်အောင် စတိုင်ကျသည်။ ၎င်းသည် အလွန်အဆင်ပြေသော အရွယ်အစားဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး သင့်အိတ်ကပ်ထဲသို့ အလွယ်တကူ လိုက်ဖက်ပါသည်။ ၎င်းတွင်ရေရှည်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေသော 370mAh ဘက်ထရီပါရှိသော stainless steel core ကိုပါ ၀ င်သည် (ကျွန်ုပ်မစမ်းသပ်ရသေးပါ!) အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ ဘောပင်ကို ကြိုတင်အားသွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
vape pen တစ်ခုစီတွင် cannabinoids 75% နှင့် terpenes 10% ပါဝင်ပါသည်။ အခြားသော လျှော်ဆီများနှင့် ကောက်နုတ်ချက်များသည် ပါဝင်မှု၏ 15% ဖြစ်သည်။
အရသာသည် တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော vaping အတွေ့အကြုံကို ရရှိစေပါသည်။ ချက်ချင်းနီးပါး ပြေလျော့သွားသလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုလိုအပ်တဲ့အခါ vape pen က ငါ့အတွက် အံ့မခန်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ငါသိခဲ့တယ်။ နာရီပိုကြာအောင် အလုပ်လုပ်တဲ့နေ့တွေမှာ ဒါမှမဟုတ် ပူလောင်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့နေ့တွေမှာ အဲဒါက ကျွန်တော့်အတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။
TribeRevive သည် အရသာရှိသော နှင့် ကျန်းမာသော မျှတမှုကြားမှ ပြီးပြည့်စုံသော ချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်ရန် ပုံဖော်ထားသည်။ အစားအစာအရောင်အတုနှင့် fructose မြင့်မားသောပြောင်းဖူးရည်များပါ ၀ င်သည့်စျေးကွက်ရှိအခြား CBD gummies များနှင့်မတူဘဲ၊ TribeRevive gummies အော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် အရောင်အသွေးနှင့် အရသာရှိပါသည်။ မူပိုင်ဖော်မြူလာတွင် အော်ဂဲနစ်ကြံနှင့် သဘာဝဖျော်ရည်များ ပါဝင်သည်။
ပီကေတစ်ခုစီတွင် CBD ၏ 25mg ပါ၀င်ပြီး လွယ်ကူသောဆေးပမာဏကိုအာမခံပါသည်။ ဆေးပမာဏသည် အစွမ်းထက်ပြီး ဂမ်မီများသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်သည်။ သင်သည် CBD စတင်သူဖြစ်လျှင်ပင်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အပန်းဖြေမှုနှင့် စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးမည့် ဤဂမ်မီများကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဂမ်မီများသည် ကျွန်ုပ်၏ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် နိုးထမှု စက်ဝန်းကို ထိန်းညှိပေးကာ ညဘက် ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေရန် ကူညီပေးကြောင်း သိရှိရခြင်းကို ကျွန်ုပ် အံ့သြမိပါသည်။ ထို့ထက်မက၊ အထူးသဖြင့် COVID ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပိုဆိုးလာသည်ဟု ယူဆသော လူမှုရေးပွဲများကို သွားသည့်အခါ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ ပိုက်ဆံအိတ်၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
gummies များသည် အလွန်နူးညံ့ပြီး သင့်ခံတွင်းကို ချက်ချင်းပေါက်စေသော အသီးအရသာကို ပေးပါသည်။ ထို့ထက်မက၊ ကျွန်ုပ်သည် ထုပ်ပိုးခြင်းကို နှစ်သက်သည် - ၎င်းသည် ဇိမ်ကျကျဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏အလုပ်စားပွဲပေါ်တွင် အလှဆင်မှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ငါ့လက်တွင် ငါ့ဂမ်မီများရှိသည်။ အားလုံးကို ခြုံငုံပြောရရင် ဒီဂမ်မီတွေဟာ CBD ဂိမ်းကို အဆင့်သစ်တခုမှာ ယူဆောင်သွားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဂမ်မီတစ်ဗူးလျှင် ၄၅ ဒေါ်လာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ထုပ်သုံးထုပ်ဝယ်ခြင်းဖြင့် ၁၅ ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် ၃၀ ဒေါ်လာ သက်သာမည်ဖြစ်သည်။
TribeRevive ၏နာကျင်မှုခရင်မ် နာတာရှည် ဝေဒနာရှိသူများကို သဘာဝအတိုင်း ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် OTC ဆေးများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ ဤအကိုက်အခဲပျောက်ခရင်မ်ကို အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ပခုံးနာခြင်း၊ နှင့် carpal ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသာမက ဒဏ်ရာများနှင့် တင်းမာမှုများကိုပါ ကုသရန် ပြုလုပ်ထားသည်။
CBD ၏ 1,000 မီလီဂရမ်အပြင်၊ ခရင်မ်တွင် arnica၊ jojoba၊ wild marjoram နှင့် ရှားစောင်းလက်ပတ်တို့ ပါဝင်သည် — အားလုံးသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ရောင်ရမ်းမှုဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ peppermint, menthol, နှင့် wintergreen တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် ပထမအကြိမ်ထိလိုက်သောအခါ အေးမြမှုကို သက်သာစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အုန်းဆီနှင့် ယူကလစ်ဆီများသည် ခရင်မ်၏အာဟာရဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေသည်။
ခရင်မ်သည် ပိုးဝင်သော texture ရှိပြီး အလွယ်တကူ လိမ်းနိုင်သည်။2အောင်စ ဗူးထုပ်က သုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ နာတာရှည် ဝေဒနာအတွက် ခရင်မ်ကို သုံးနေတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး မိနစ် 30 မှ တစ်နာရီ တစ်ကြိမ် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ပခုံးနဲ့ လည်ပင်းကို နာရီတိုင်းလိမ်းပြီး တင်းမာမှု သက်သာလာတာကို ချက်ချင်း သတိပြုမိပါတယ်။ အမဲစက်များပေါ်တွင် ခရင်မ်၏ အာနိသင်ကို စမ်းသပ်ရန် အခွင့်အရေးမရှိသော်လည်း ၎င်းသည် ထိရောက်ကြောင်း သေချာပါသည်။
ခရင်မ်သည် ခရီးသွား အရွယ်အစားဖြင့် ပါ၀င်သောကြောင့် သင်နှင့်အတူ နေရာတိုင်း ယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ ခရီးသွားထုပ်ပိုးမှုမှာ ၁၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အရွယ်အစားမှာ ဒေါ်လာ ၆၀ ဖြစ်သည်။ အကိုက်အခဲပျောက်ခရင်မ် နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခု ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်လည်း $15-$60 သက်သာနိုင်သည်။
အဆိုပါ TriBeauty ဆိုးဆေး CBD၊ နှင်းဆီပေါင်းခံ၊ အော်ဂဲနစ်အစိမ်းရောင်နှင့် အဖြူရောင်လက်ဖက်ရည်၊ နှင့် Hyaluronic Acid၊ အော်ဂဲနစ် Goji Fruit Extract တို့ပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် hazel၊ Niacinamide၊ Rose Ether၊ Carrot Root Extract နှင့် Panthenol တို့ ကြွယ်ဝသည်။
အဆင်ပြေတဲ့ 100 ml spray bottle နဲ့ လာပေမယ့် ခရီးသွား အရွယ်အစား (ငါသေချာပေါက် လုပ်ပါ့မယ်။) သန့်စင်ထားသော အရေပြားပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ဖြန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဂွမ်းစဖြင့် လိမ်းနိုင်ပါသည်။ အပျော့ဆုံး ဂွမ်းကပ်ပြားတွေတောင် ငါ့အသားအရေကို ယားယံစေတတ်တဲ့အတွက် အရင်ရွေးချယ်မှုကို သဘောကျတယ်။
Toner သည် အရေပြား၏ ရေဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးကာ ချွေးပေါက်များ၏ အသွင်အပြင်ကို လျော့နည်းစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေပြီး စိုပြေစေပါတယ်။ နှင်းဆီရနံ့က သင်းပျံ့ပြီး လတ်ဆတ်တယ်။ Toner လိမ်းပြီးရင် မျက်နှာလေးက သန့်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာ ခံစားရတယ်။
ထို့အပြင် ငါးရက်ကြာပြီးနောက် (ကျွန်ုပ်၏ အလှအပဆိုင်ရာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး) ကျွန်ုပ်၏ကြက်သားပေါ်ရှိ ချွေးပေါက်များ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ကူညီပေးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် အဆီထုတ်လုပ်မှုကို တားဆီးပေးသောကြောင့် ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းကို ထိန်းထားနိုင်သည်။
ဈေးနှုန်းတွေက ပြိုင်ဆိုင်မှုထက် ပိုပါတယ်။ ခရီးသွားအရွယ်အစားမှာ ၁၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အရွယ်အစားမှာ ဒေါ်လာ ၄၀ ဖြစ်သည်။
TribeTokes ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- စီရင်ချက်
TribeTokes သည် စျေးကွက်ရှိ ထိပ်တန်း CBD ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ဖော်မြူလာများဖြင့် ထုတ်ကုန်များသည် သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ သန့်ရှင်းသောဖော်မြူလာများနှင့် vape pen နှင့် gummies များ၏ အရသာအပြည့်ကို နှစ်သက်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်များ၏ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့ကြောင့် အံ့ဩမိပါသည်။ ထို့ထက်မက၊ စျေးနှုန်းအကွာအဝေးသည် အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လျှော့စျေးများနှင့် လျှော့စျေးအချို့ကို သင်မကြာခဏ ရယူနိုင်သောကြောင့် TribeTokes သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းရန် မမေ့ပါနှင့်။
tribetokes cbd အမှတ်တံဆိပ်
MS၊ Lund တက္ကသိုလ်၊ ဆွီဒင်
အာဟာရသည် လူ့ဘ၀တွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ စားသောက်မှုအလေ့အထသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အာဟာရဗေဒပညာရှင်များသည် အလွန်တင်းကျပ်သော အစားအသောက်များကို အတင်းအကြပ် တွန်းအားပေးသည်ဟု လူအများကြားတွင် အထင်အမြင်လွဲလေ့ရှိသော်လည်း ယင်းမှာ မမှန်ပါ။ အမှန်တော့၊ ကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမျှ တားမြစ်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ဖူးသော အကြံဥာဏ်များနှင့် ချက်ပြုတ်နည်းအသစ်များကို ပေးခြင်းဖြင့် အစားအသောက်အမှားများကို ထောက်ပြပြီး ၎င်းတို့ကို ပြောင်းလဲရန် ကူညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏လူနာများအား အပြောင်းအလဲကို တွန်းလှန်ရန်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ရန် အကြံပေးပါသည်။ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဖြင့်သာ စားသောက်မှုအလေ့အထကို ပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင် ဘဝ၏ မည်သည့်နယ်ပယ်တွင်မဆို ကောင်းသောရလဒ်ကို ရရှိနိုင်သည်။ အလုပ်မရှိတဲ့အခါ တောင်တက်ရတာ ကြိုက်တယ်။ သောကြာညနေခင်းတစ်ခုမှာ၊ ငါ့ခွေးနဲ့ ပွေ့ဖက်ပြီး Netflix တစ်ချို့ကို ကြည့်ရင်း မင်းငါ့ကို ဆိုဖာပေါ်မှာ မင်းတွေ့နိုင်ခြေများပါတယ်။
TranscEND LABS သုံးသပ်ချက် 2022
PROVACAN သုံးသပ်ချက် 2022
ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ယူမှုများ CBD ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
ပျက်စီးနေတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ မီးပွားကို ဘယ်လိုပြန်ရနိုင်မလဲ။